Filoha Hery Rajaonarimampianina : Nanohana ny ezaka nataon’ i Père Pedro -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Hery Rajaonarimampianina : Nanohana ny ezaka nataon’ i Père Pedro
Faritra iray manan-tantara eto an-drenivohitra ny Akamasoa eny Andralanitra. Nitsidika fanindroany ity toerana ity indray ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly ary nitondra fanohanana sy fanampiana ho an’ireo vahoaka manodidina ny 25000 monina eny. Tao anatin’ny 28 taona nisiany dia politika nentin’i Père Pedro namorona ity toerana ity ny « fanampiana ny namana, ny sahirana ary ny mahantra ». Nahatsapa izany ny Filoha ary nanamarika fa « efa nitarika ary nanome ohatra tamin’ny ady amin’ny fahantrana ny Akamasoa ». Porofon’izany, tsy nihabahamba ny Père Pedro nanamarika fa « ny 80% dia miezaka miala amin’ny fahantrana fa mbola misy ireo 20% izay mbola variana amin’ny toaka, rongony, halatra, hala-botry… Tsy miezaka ny mivoatra ». Ireto farany izay mitarika korontana sy mitady hanao valifaty nefa tsy mampatahotra ary tsy mampihemotra an’i Père Pedro sy ny ankamaroan’ny mponina izany. Ny fitandroana ny filaminana eny an-toerana no anisan’ny nangatahan’izy ireo ny hisian’ny mpitandro filaminana vehivavy hiasa eny an-toerana. Fangatahana izay novalian’ny Filoham-pirenena avy hatrany fa ho azon’izy ireo. Tao anatin’ny 28 taona nijoroany dia nanamarika ny Père Pedro fa azo atao tsara ny mandresy ny fahantrana. « Nandritra ny 57 taona no efa nisy fahantrana teto amin’ny firenena, ary io fahantrana io no nahatonga an’i Père Pedro nanangana izao tanàna izao », hoy hatrany ny filoham-pirenena. « Tsy azo atao ny mitaraina hoe mahantra fa tsy maintsy manana teti-panorina, tetikasa, fahavononana ary mametraka fotodrafitrasa mijery lavitra », hoy hatrany izy. Anisan’ny hita taratra teny amin’ny endrik’ireo mponina teny amin’ny Akamasoa ny fanantenana amin’ny fandresena ny fahantrana. « Aoka isika, aoka ianareo tsy ho fitahan’ny olona izay milaza fa toa mbola misy ihany ny fahantrana. Lavaka nisy tao anatin’ny 50 taona tsy ho mora ny hanototra azy », hoy ihany ny filoha Hery Rajaonarimampianina.
Anisan’ny zava-dehibe ho an’ny Akamasoa ny tontolon’ny fampianarana ary mametraka izany ho laharam-pahamehana izy ireo. Manodidina ny 14 000 ireo ankizy sy tanora mpianatra eny an-toerana. Anjara biriky efa noraisin’ny fanjakana teo amin’io sehatra io ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra 350 eny amin’ny Akamasoa. « Efa manangana sahady ny ho avin’ity firenena ity ianareo. Ary efa nobeazina tamin’ny toetra tsara, ny fifanajana, fahamarinana, voakolokolo ara-panahy, izay ilaina hampandrosoana sy hitiavana ny firenena », hoy ny filoha raha nitodika tamin’ireo tanora mpianatra.
Toerana iray voafaritra ho fidodododoan’ireo vahoaka sahirana ny akamasoa ary maro ireo mangataka trano fonenana isan’andro eny an-toerana. Toa izany koa ny toeram-pitsaboana sy ny fasana iraisana. Anisan’ny nampanantenain’iny Filoha fa ho avy tsy ho ela ny fanampiana sy ny fampitaovana eo amin’ny sehatry ny fitsaboana eny amin-dry Père Pedro. Tsy maintsy ho vahana ao anatin’ny fotoana fohy ihany koa ny famatsiana rano fisotro madio amin’ny fijerena sy fampiasana ilay fitehirizan-drano miaty 250m3 eny an-toerana. « Tsy maintsy apetraka ireo fotodrafitrasa fototra no tsy maintsy mitsinjo lavitra ary manosika ny firenena miady amin’ny fahantrana », hoy hatrany ny Filoham-pirenena.
Nandritra izao fitsidihina nataony teny amin’ny Akamasoa izao no nitondran’ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny Filoham-pirenena sy ny vadiny fanampiana ho an’ny mponina eny an-toerana. « Rariny raha ampiana ianareo fa efa niezaka, efa nanatanteraka. Tsy ahavita taona ianareo, nefa rariny sy hitsiny ary adidinay ny manampy sy manohana. Fa izay ataonareo amin’ireny madinika ireny dia efa nataonareo tamiko ihany koa, hoy ny Tompo », araka ny lahatenin’ny Filoham-pirenena ihany.
Nanamarika ihany koa ny Filoham-pirenena fa tsy ao anatin’ny akamasoa ihany no misy ireo toe-tsaina lomorina sy tia tena fa hita taratra izany eo amin’ny andavanandron’ny Malagasy. Nasiany teny tamin’izany ny fisian’ireo mpanararaotra mampiakatra ny vidim-piainana. « Ny vahoaka mahantra no tena iharan’izany ka mila miady amin’izany isika », hoy ny fanamarihany. Natsidiky ny Père Pedro tamin’ity fihaonana ity ihany koa ny fisian’ireo mpanam-bola mangalatra sy mivarotra tany eny amin’izy ireo.
Ireo fanampiana nomena ny akamasoa: Vary : 200 gony ; Tsaramaso 30 gony, Menaka 25 bidao amin’ny 25l, bodofotsy ary vola Ar 20 tapitrisa